Tarsan oo saaka ka soo degay garoonka Muqdisho | Wardoon
Home Somali News Tarsan oo saaka ka soo degay garoonka Muqdisho
Tarsan oo saaka ka soo degay garoonka Muqdisho
Diyaaradda siday Safiirka Soomaaliya u fadhiyay dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa waxaa la saarnaa Marwada Madaxweynaha Soomaaliya Marwo Seynab oo maalmahan ku sugneyd Nairobi.
Sidoo kale waxaa diyaaradda la socday Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo xalay soo gaaray Nairobi, isagoo ka soo laabtay dalka Sweden.
Dowladda Soomaaliya ayaa la filayaa inay jawaab ka soo saarto tallaabadii Kenya ay qaaday ee ay dalkeeda kaga soo saartay Safiirkii Soomaaliya, wada tashina ugu yeertay Safiirkeedii u joogay Soomaaliya.
Xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa meeshii ugu xumeyd gaaray, kaddib markii wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ay soo saartay war saxaafadeed ay ku cadeneyso inay xiriirka u jartay Soomaaliya, iyagoo ku andacooneysa in dowladda Federaalka in xaraashtay shidaalka dhul badeedka dhaca xuduuda Kenya.
Previous articleXildhibaan Mahad Salaad “difaaca dalka waa muqadas”
Next articleMaxaa ka dhalan kara xiriirka xumaaday ee Soomaaliya iyo Kenya?
Xaaf iyo Qoor-Qoor oo kulmay +sawirro
Taliyihii ilaalada Farmaajo oo la dhaawacay